ဥယျာဉ်တော်၌ self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာများ | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
ဥယျာဉ်တော်၌ self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာများ
self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာ: ကရှာဖွေလိုက်ပါ!
အဘယ်မှာရှိအိမ်လုပ် nesting များနမူနာ box ကိုဆွဲထားသလော
ပို. ပို. မကြာခဏသင်ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်သစ်တောများမှာသူတို့ကိုကြည့်ပါ: nesting များနမူနာသေတ္တာများ ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိငှက်။ အဘယ်အရာကိုမလိုအပ်တဲ့သို့မဟုတ်ပင်ဝါသနာအတိုင်းအများအပြားအားဖြင့်ပယ်ချခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအသက်တာ၌ငှက်အတော်များများသိမ်းဆည်းထားပါသည်။
Self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာများ မသာမွေးမြူမြေပြင်ဖြစ်ကြပေမယ့်အအေးကနေအမိုးအကာအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ဝတ်ပြုကြလော့။ အဟောင်းနှင့်ပုပ်သစ်ပင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ်တောတွေထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကြောင့်ဂျာမနီ၏တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Society ကပင်, ငှက် nesting များနမူနာ niche တစ်ဦးမရှိခြင်းကိုမြင်, နှင့်သဘာဝလိုဏ်ဂူရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
အသိုက် box ကိုသူ့ဟာသူတည်ဆောက်
ဒါကြောင့်၏ပုံစံကိုငှက်အတုမွေးမြူရေးက်ဘ်ဆိုက်များရန်အရေးကြီးပါသည် Self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာများ ကမ်းလှမ်းမှုကို။
ကလေးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူ nesting များနမူနာသေတ္တာများတည်ဆောက်
၏သင်တန်းကိုသင်လည်းတဦးတည်းထည့်ထားနိုင်ပါတယ် nesting များနမူနာသေတ္တာ Buy ။ ပညာရှိများနှင့်လှပသောက, သို့သော်, ဖြစ်ပါတယ် အမြိုးသားအသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူအသိုက် box ကိုတည်ဆောက်ရန်, ပထမဦးစွာထိုကဲ့သို့သောပူးတွဲလုပ်ရပ်တွေသငျသညျအတူတူဖြုန်းကြောင်းရိုးရှင်းစွာတန်ဖိုးရှိသောအချိန်များမှာဒုတိယအ, သားသမီးငှက်နှင့်၎င်းတို့၏ဦးစားပေး၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ဤမျှလောက်ပိုပြီးလေ့လာပါ။
အဆိုပါ အကယ်. nesting များနမူနာသေတ္တာ တစ်ချိန်က positioned နှင့်မိုးရွာအလည်အပတ်ခရီးအတော်ပင်ဖြစ်လျှင်, ကလေးတွေဟာနှင့်အတူအောင်မြင်မှုမှာများစွာသောသဘောမျိုးရှိတယ် Self-လုပ်အသိုက် box ကို။ ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, သူတို့ကံကောင်း chickadees, Wren နဲ့တခြားငှက်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ပါသည် - ပင်ရှဥ့်ယင်းကြောင့် -beobachten nesting များနမူနာသေတ္တာ အိပ်တဲ့နေရာအဖြစ်အသုံးပြုပါ။
အထူးသဖြင့်အအေးမိဆောင်းရာသီအတွက်ကယ်တင် အိမ်လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာ ပင်အချို့ငှက်တို့သည်လည်းဘဝ။ အထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်များဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းအစားအစာကိုရှာဖွေသည့်အခါရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, သူတို့အလွန်အဆီရှို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တစ်ဦးကအအေးညဥ့်ပြီးသားထို့နောက်တစ်ဦးသေဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
der အိမ်လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာ အကောင်းဆုံးအကြောင်းကိုနှစ်ခုစင်တီမီတာအထူဖြစ်သင့်သော Spruce, ထင်းရှူးသို့မဟုတ် Beech သစ်သားကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစား (စတာတွေဆန့်ကျင်ဖန်းဂတ်စ်) သစ်သားကြာရှည်၏မဟုတ်ရင်သင်တိရိစ္ဆာန်များထိခိုက်, linseed ရေနံသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဆေးသုတ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ထို့နောက်အမှုနောက်ပိုင်းမှာပိုကောင်းသန့်စင်နိုင်ပါတယ်ကြောင့် Naturschutzbund, screw နှစ်ခုအစားလက်သည်းသုံးစွဲဖို့ကြောင်းအကြံပြုသည်။ အလွန်အရေးကြီးပါသည်၏အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့လေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေရှိပါတယ် Self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာ.
သေတ္တာထဲတွင်သားကိုမွေးရန်ဖြစ်ပါသည်သောမျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတဦးတည်းဝင်ဝအပေါက်၏အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှိပါတယ်။ သာနှစ်ဆယ်ငါးမီလီမီတာမှာ Meis အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားအမျိုးအစားများကိုဖန်တီးနေချိန်မှာသုံးဆယ်မီလီမီတာခုနှစ်တွင်ဥပမာ, nuthatch, ကြီးသော tit နှင့်စာအားဖြင့်ချော်နိုင်ပါတယ်။
အတွင်းပိုင်း၏အရွယ်အစားကြောင့်သူတို့ရဲ့ငှက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ် Self-လုပ်အသိုက် box ကို ဆက်စပ်။ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အညီအရွယ်အစားချိန်ညှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဧရိယာ၌ nesting များနမူနာသေတ္တာများပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းနှင့်အရာမတိုင်မီ၎င်းတို့၏ကလေးများနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုအကြောင်းကြားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ box ကို၏အခြေစိုက်စခန်းမဆိုအမှု၌ထက်ပိုမိုတကျိပ်နှစ်ပါးသောတဆယ်နှစ်ပါးသောရန်စင်တီမီတာဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ဦးကအသင့်လျော်ခြင်းနှင့်အကဲဆတ်သောလမ်း, အဆောက်အဦညွှန်ကြားချက်ကိုအလွယ်တကူ Internet မှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီမှာဆွဲထားများအတွက်အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များများမှာ Self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာ, အဆိုပါဝင်ပေါက်ပေါက်မြေပြင်ကိုကျော်ဆွဲထားအရှေ့နှင့် box ကိုကအနည်းဆုံးနှစ်ပေရင်ဆိုင်ရသင့်ပါတယ်။ သစ်ပင်မှနိုင်ပါတယ် Self-လုပ် nesting များနမူနာသေတ္တာများ ဝါယာကြိုးကလစ်များ, ဒါမှမဟုတ်စွန်ခံလက်သည်းတွေနဲ့ဆွဲထားကြ၏။
သင်တို့သည်လည်းသူကမိုးရွာသည့်အခါရေကိုမထိုးဖောက်နိုင်မသေချာအောင်ရမယ်: မဟုတ်ဘဲရှေ့ဆက်ဒီရည်ရွယ်ချက် box ကိုဆွဲထားကြကုန်အံ့, သင်တို့သည်နောက်တဖန်အဝင်ဝအပေါက်အတော်လေးဒါကောင်းသောကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လျှင်ပင်။ အမြဲတမ်း box ကိုgeräubert martens သို့မဟုတ်ကြောင်မဖွစျနိုငျကွောငျးကိုသေချာအောင်!
သစ်ပင်များအနားမှာသင့်လျော်သောနေရာများ, tool ကိုသှနျး, အိမ်သူအိမ်သားမြို့ရိုး, လသာဆောင်သွန်းလောင်းနေကြသည်။ ထိုမွေးမြူရေးရာသီအညီ box ကိုသန့်စင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအအဟောင်းကိုအသိုက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် Self-လုပ်အသိုက် box ကို အထဲကတိုက်။ လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ဒီမှာရောဂါကူးစက်မှုကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်, တိုက်ခန်းသို့ကိစ္စတွင်မယူကြဘူး!
တစ်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် Self-လုပ်အသိုက် box ကို ဆွဲထား, ဆောင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါထုနှင့် sawed ရမည်ဖြစ်သည်!
ရေကန် | အိမ်ဥယျာဉ်
ဥယျာဉ်တော်၌သားသမီးတို့အဘို့တစ် sandbox 'Create
ဆောင်းရာသီတွင်နို့တိုက်ကျွေးမှု Birds ဂိမ်း | ဥယျာဉ်တော်သဘာဝတရား
Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေး | ရုက္ခဗေဒမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့် ...
ဥယျာဉ်တော်နှင့်အတူ Coloring အိမ်သူအိမ်သား
ကလေးများအဘို့အက Short Story - ဥယျာဉ်တော်၌စွန့်စားမှု
နှင်းဆီပန်းများနှင့်စောင့်ရှောက်မှုမြင့်တက် | ဥယျာဉ်တော်အပင်